Ihe na-abịa na Crypto Casino Oke - pisklak.net
Ihe na-abịa na Crypto Casino Oke
Naanị ụbọchị ole na ole fọdụrụ na June ma anyị nwere ọtụtụ ihe ga-eju afọ. Olileanya, ndị egwuregwu anyị na-eguzosi ike n’ihe na-eche otu ihe n’ihi na anyị nyere ọtụtụ nkwụsị ozugbo na akaụntụ ha. Tupu anyị amalite idegharị akwụkwọ kwa ọnwa, dị ka anyị na-eme kwa ọnwa, anyị chọrọ ikpughere gị ihe ị nwere ike ịtụ anya na cha cha crypto Extreme na ọnwa na-abịa.
Enweghi Bongo Wagering Hotter Than Ever
Na July okpomọkụ dị na ọkacha mmasị gị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Oke! Anyị ga-ebuli okpomọkụ ahụ na ego cha cha kachasị mma na naanị ihe ị kwesịrị ime bụ igwu egwuregwu kachasị amasị gị. N’ime ọnwa ole na ole gara aga, anyị nyere gị ọtụtụ koodu nwere ohere dị ukwuu iji merie nnukwu ego. Na July anyị ga-eme otu ihe ahụ. Ma, anyị na-agbasi mbọ ike ime ego ahụ ka mma karịa mgbe ọ bụla.
N’ime ego niile nke ọnwa July, ị ga – enwe ike igwu egwu na enweghị ego ọ bụla ma nweta max 10% na ego LTC. Ọzọkwa, anyị echefubeghị spins na-amasịkarị gị. N’ime ọnwa na-abịanụ, ị ga – enweta akara ngosi efu iji kpọọ Spring Wilds, otu n’ime oghere ndị kachasị ewu ewu na cha cha anyị yana ịnwale Miami Jackpot, egwuregwu ọhụrụ a ga – ewepụta na Wednesde.
Jikere maka nkwado 100% cashback na ntinye ego nkwụnye ego nke 5%. Ọzọkwa, ị ga-enwe ohere igwu egwu na-enweghị wagering na enweghị max cashout chọrọ na-enweta 35% agbam ume. Ihe a niile nwere ike ịbụ karịa ihe mere ị ga – eji nọnyere anyị n’ọnwa Julaị ma kpọọ egwuregwu kacha mma RTG.
Egwuregwu ọhụrụ na Crypto Casino Oke
Anyị ga-ahụ June anya na nnukwu oghere ọhụụ. Na ụbọchị abụọ RTG ga ẹkedori Miami Jackpots oghere, a mbụ ngwa ngwa kụrụ Jackpot egwuregwu. Egwuregwu a dị oke egwu ma tinye ya na Ocean Drive, okporo ụzọ kachasị ewu ewu na Miami. Nakọta n’etiti 3 na 9 neon suns na ntụgharị ọ bụla ị ga-ebute njirimara Jackpot. Nweta akara 3 gbasasịa ma anyị ga-akpọrọ gị n’ime abalị ebe ị nwere ike ịhọrọ atụmatụ Egwuregwu Free gị yana egwuregwu niile na-arụ ọrụ.
Agbanyeghị, nke ahụ abụghị naanị n’ihi na July 21 bụ ụbọchị maka oghere ọhụrụ ọzọ. Kechioma Catch jupụtara na atụmatụ iji hụ na ị nwere ezigbo ọmarịcha ahụmịhe ọ bụla! Onyinye Ntanetị Random ga-enye gị ụgbọ mmiri mmeri. Bursting Wilds na-eju gị anya karịa n’oge Free Games na okpukpu abụọ gbawara. Bịanụ ma nwee obi ụtọ n’udo!
Lee gi na cha cha cha cha Oke!